Shiinaha COVID-19 Qalabka Ogaanshaha Antigen ee soosaarayaasha Muunad Xaakada iyo alaableyda | Yinye
Badeecadani waxay ku habboon tahay ogaanshaha tayada ee coronavirus-ka cusub ee shaybaarka suufka sanka. Waxay bixisaa caawimaad ku saabsan ogaanshaha infekshinka cudurka loo yaqaan 'coronavirus' cusub.
Badeecadani waxay ku habboon tahay ogaanshaha tayada coronavirus-ka cusub ee shaybaarka xaakada. Waxay bixisaa caawimaad ku saabsan ogaanshaha infekshinka cudurka loo yaqaan 'coronavirus' cusub.
Ku kaydi xirmada alaabta heerkulka 2-30 ° C ama 38-86 ° F, oo ka fogow soo-gaadhista iftiinka qoraxda.
Qalabku wuu deggan yahay taariikhda uu dhacayo ee ku daabacan calaamadda.
Marka aluminiumka kiishkiisa la furo, kaarka tijaabada ee gudaha ku jira waa in lagu isticmaalo hal saac gudahood.
Soo-gaadhista muddada dheer ee deegaanka kulul iyo qoyan waxay sababi kartaa natiijooyin aan sax ahayn.
Badeecadani waa mid lagu dabaqi karo xaakada Isticmaalka noocyada kale ee muunada waxay sababi kartaa natiijooyin tijaabo oo aan sax ahayn ama aan ansax ahayn.
Hore: Qalabka Kaadida Tijaabooyinka Hal-Tallaabo Keena Xidhmada Xidhmada Maandooriyaha
Xiga: Qalabka loo yaqaan 'COVID-19 Antigen Detection Kit' oo loogu talagalay Muunadaha Sanka / Xaakada （is-tijaabinta)
COVID-19 Qalabka Baaritaanka Antigen ee Sanka / ...